NamasteNEPALI.com: 'काँग्रेससँग मिसिदैमा द्वन्द्वकालीन मुद्धामा उन्मुक्ति पाउदैनन्'
'काँग्रेससँग मिसिदैमा द्वन्द्वकालीन मुद्धामा उन्मुक्ति पाउदैनन्'
सरकारबाट बहिर्गमन हुादै गर्दाको क्षणलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
यो त नेपाल र नेपालीका लागि नौलो कुरा भएन । २५ वर्षमा २२ वटा सरकार बन्यो । यही नेपालीले बनाउने र नेपालीले नै भत्काउने भए न हुन्थ्यो । बनाउन पाए पनि आफ्नो समयमा भत्काउने र बनाउन नपाएपनि अनेक गरेर भत्काउथे, यसपाली पनि भत्काए ।
पहिलोपटक सरकारमा गएको मान्छे, यसरी नौ महिनामै हट्नुपर्ला भन्ने कुनै कल्पना गर्नुभएको थियो ?
होइन‘। मैले इतिहास हेरिराखेको थिए नी । यसपालीको सरकार त लामै हो । पहिले संविधान जारी गर्नै नदिनका लागि, त्यसपछि यो सरकार बन्नै नदिनका लागि त्यत्रो ठूलो प्रयत्न भयो । खेल अनेक गरे । त्यसैले सुरुदेखि नै यो सरकार भत्काउाछन् भन्ने नै थियो । यो जुनदिन बन्यो त्यो दिनदेखि नै विभिन्न खालका खेल रचिए ।
वामपन्थी शक्तिहरुको सरकार ढल्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने लाग्छ ?
वामपन्थीहरुको सहकार्य भएको भए अलि समय टिक्थ्यो । सरकारमा बसेर फाइदा लिनुसम्म लिएर त्यसपछि जुनकुरा अहिलेको सरकारले गराउन सक्दैनथ्यो, तिनैकुरा पनि गराउन प्रयत्न भयो । ति कुराहरु नहुनेजस्तो भएपछि उनीहरु बाहिरीए ।
त्यो कुरा के थियो ?
उनीहरुले प्रशस्त फाइदा लिएका हुन् । आठ आठ ओटा रोज्जा मन्त्रालय, सभामुख, उपराष्ट्रपति पाए । यो नौ महिनामा प्रशस्त बार्गैनिङ पनि गरे । सबैभन्दा ठूलो कुरा यो सरकारले २०५२ देखि २०६२ सम्मका द्धन्दकालका उनीहरुको जो मुद्दा हुन् त्यो मुद्दाबाट उनीहरुलाई उम्काइदिनुपर्छ भन्ने माग हो । नौ बुादे सहमति गर्दा २ वटा दलका बीचमा त्यो कुरा सहमति भएको थियो । त्यसमै पनि हाम्रो पार्टीको विमती थियो । २०५२ देखि २०६२ सालसम्मका पिडितहरुलाई इन्द्रका बाउ चन्द्र आएपनि, त्यता कुनै निर्णय गरेपनि मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरुलाई अहिलेको सरकारले निर्णय गरेर माफी मिनाह गरेको भएपनि त्यो संभव थिएन । उनीहरुलाई अहिले सबैभन्दा समस्या त्यही भएको छ । यतातिर नभएको झन् उता नेपाली काँग्रेससँग मिसिएर यो समस्याबाट पार पाउने मैले देख्दिन ।
माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई सेल्फ सेन्ट्रीक भनेर आरोप लगाए, प्रधानमन्त्रीको लागि तपाईले पनि लामो समय सागै काम गर्नुभयो, त्यो आरोपमा कत्तिको दम देख्नुहुन्छ ?
त्यसमा कुनै दम छैन । सत्यता छैन । २०५२ देखि २०६२ को घटनामा उन्मुक्ति नदिएको भनेर उनीहरुमा अहिलेको छट्पटी हो । त्यो अवधीमा थुप्रै निर्दोष मान्छेको हत्या, वलत्कार र अपहरण भएको छ । मानवताविरोधी अपराध भएका अपराधीहरुलाई छुट्टी दिनुपर्छ, मिनाह दिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको जुन जिद्दी छ, उनीहरुलाई त्यसैले पोलेको छ । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेलामा‘हामी सरकारमा नगएको भए प्रतिक्रियावादीहरले हेग पठाउथे’ भनेर प्रश्टै भनेका थिए । त्यही छटपटी उनीहरुको मुख्य समस्या हो । तर त्यो छटपटी काँग्रेसको पछि लागेर वा छिमेकीको पछि लागेर उम्कन चाँही राज्य पक्षलाई पनि गाह्रो छ र स्वयम् माओवादी केन्द्रलाई पनि गाह्रो छ ।
प्रचण्डले सरकारको कामप्रति खासै टिप्प्णी गरेनन्, मन फाटेको कुरा गरे, खासमा त्यस्तै मात्र हो त ?
सबैकुरा पाएर किन मन फाट्न पर्‍या छ ? त्यसरी फाटेको मन कसले सिलाइदिने त ? उनीहरुको फाटको र एमालेले सिलाउन नसकेको मन अब नेपाली काँग्रेसले सिलाउला भनेर उनीहरुले जसरी फाल हालेका छन् । यो वामपन्थीहरुको भूस कुटीएको छ र नेपाली काँग्रेसको चामल फल्लीयो यसपाली ।
तर, अघिल्लो पटक आफैंले बद्ख्वाई गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डले भोलीपल्ट राजनेताको पगरी गुथाइदिए नी ?
अवसरवादीहरुले जसका अगाडि जे कुरा गर्दाखेरी खुसी पार्न सकिन्छ, त्यही कृतिम कुरा गर्छन् । यो पनि यस्तै नक्कली कुरा हो । उनले के हौवा फिजाएका थिए भने काँग्रेसहरु पनि थर्कमान थिए की ओली सरकारले संसद विघटन गर्छ, सरकार बन्न दिन्न । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई एक हप्ता फ्रान्स गएर फर्केर आाउछु र स्वत राजीनामा दिन्छु भनेर माग्दा फ्रान्स सम्म जान नदिएको इतिहास काँग्रेससँग छ । इतिहासमा आफूले गरेको पाप, बदमासीको सम्झना भयो होला काँग्रेसलाई । त्यसकारण काँग्रेस पनि छटपटिएको थियो । काँग्रेसमात्र होइन छिमेकमा भएको थियो धेरै छटपटी । आफ्ना पालित पोषित दलालहद्धारा नेपालमा अवरोध र अस्थिरता कायम गरिरहने र यहाा असमान सन्धी लाद्ने, इतिहासका असमान सन्धी नि खारेज नगर्ने, यहााका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथी दााइ हालेर कालन्तारमा नेपाललाई सिक्कीम बनाउने, नभएपनि भुटानको स्तरमा लैजाने भारतीय विस्तारवादको जुनखालको रणनीति छ, त्यो लगातार अगाडि बढाइराखेका छन् । त्यसो हुनाले नेपाली जनता सर्तक हुन जरुरी छ ।
नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया ससरु हुनासाथ ‘मुसा’हरुको दौडधुप सुरु हुन थाल्यो तपाइको अबको कदम के हुन्छ ?
विदेशीले यहाा बढी चलखेल गर्ने त यहााका मुसाहरुलाई खेलाउन सकेर न हो । नेपालका मुसाहरु देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रको स्वाभिमान भन्दा आफ्नो सत्ता स्वार्थ, निजी स्वार्थ र महत्वकााक्षालाई मुख्य प्रधानता ठान्ने गर्छन् । यहाँका मुसाहरुलाई त सात साल देखिनै खेलाइराखेको छ । त्यसभन्दा पहिलोका शासकहरुलाई बेलायती सामाज्यले खेलाउाथ्यो । २००७ सालपछि यहाँका मुसाहरुले राष्ट्रको स्वार्थ, जनताको स्वार्थ, देशको स्वाभिमान भन्दाआफ्नो स्वार्थ कसरी पुरा हुन सक्छ, गुटको स्वार्थ कसरी पुरा हुन सक्छ, त्यतातिर ध्यान दिएका छन् । त्यस खालका अवशरवादीबाट न हो विदेशीहरुले फाइदा लिएका । विदेशीको आडभरोसामा सत्ताको स्वाद रसस्वादन गर्ने मुसाहरु यहाँ बाक्लै छन् ।नेपाली जनतालो चिन्दै गएका छन् । मुलुकको लागि यो ठुलो खतराको कुरा हो ।
तपाईहरु चाँही अब सरकारमा जानुहन्छ की जानुहुन्न ?
संविधान बनाए वापत हामी सरकारबाट लखेटिनुपर्ने, हामीले आफ्नो सरकार आफैंले बनाए वापत हामीले नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्ने ? यस खालको खेलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा जाँदैन, तपाई ढुक्क हुनुस् ।
अरु सहयात्री पाटीहरुले धमाधम साथ छाड्दा पनि तपाइले चाँही अन्तिमसम्म साथ दिनुभयो, कारण के हो ?
हाम्रो पार्टीका एमालेसित कयौं कुरामा मतभेद छ । त्यो कुराको म आलोचना गर्छु । तर यसपाली विशेषगरी ओलीजीले संविधान निर्माण गर्ने कुरामा, विदेशीको थिचोमिचो विरुद्धमा जुन अडान लिनुभयो, त्यो अडानका कारणले मात्रै हाम्रो पार्टी सत्तामा गएको हो । भारतीय एकाधिकारका विरुद्धमा उहाँ जसरी अडिनुभयो, त्यसका कारण म कयौं मतभेदका वावजुद सरकारमा बसें । मैले साथ दिइरहेको छु ।
तपाईको नजरमा प्रधानमन्त्री ओली कस्तो मान्छे ?
उहाँका कमिकमजोरी त छैनन् भन्ने होइन । इतिहास पनि मलाई थाहा छ । महाकाली सन्धीदेखि २०६२–०६३ सालको आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि म उहाँलाई राम्ररी जान्दछु । तर यसपाली उहाँले ल्याएको जुन अडान हो त्यो अडानसित म धेरै सहमत छु । भारतीय विस्तारवादको एकाधिकारलाई उहाँले तोडेर अहिलेसम्म कयौं नेपालका प्रधानमन्त्री चिनमा गए, आए । उनीहरु कसैले पनि चिनसित व्यापारिक सम्झौता, पारवहन सम्झौता गर्नै नसकेको स्थितिमा ओलीजीले त्यो काम गर्नुभयो, त्यो इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा छ । ति कामहरु उल्ट्याउनका लागि त्यो षड्यन्त्रमा प्रचण्ड समेत सामेल भए । र, काँग्रेस अहिले रमाइराखेको छ । उहाँले राष्ट्रियताका सवालमा लिनुभएको अडान सकारात्मक छ र त्यो अडानलाई हामीले साथ दिनुपर्छ ।
आफैं बसेको सरकारलाई आफैंले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ढाल्ने जस्तो लज्जाजनक कुरा इतिहासमा केही पनि होइन । माओवादीले जति फाइदा एमालेसित लिनसक्थ्यो, कुनै पनि हालतमा अहिलेको यो नयाँ बन्ने गठवन्धनबाट ल्याउनै सक्दैन । माओवादीलाई नै उपयोग गरेर अहिले बनेको संविधानलाई शंसोधनको नाम वा विभिन्न बहानामा सकेसम्म यो संविधानलाई खारेज नै गर्ने नभए पनि भारतले आफ्नो अनुकुलको शंसोधन गर्न लाएर नयाँ बनेको गणतान्त्रिक संविधान क्षतविक्षत गर्ने अत्यन्त ठूलो खतरा छ । प्रचण्डलाई पनि ठूलो एउटा परिक्षा छ की उनी कति गोटी बन्छन् ?
– बुधबार साप्ताहिकबाट
Labels: MAIN, NEPAL, NEWS, TALK